မင်္ဂလာလက်ဆောင်အဖြစ် တန်ဖိုးထားရတဲ့ ဆွဲကြိုးနဲ့နားကပ်ကိုရောင်းချပြီး လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကို လှူဒါန်းသွားမယ့် ဇာဏ်ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီ –7Day Daily News
သရုပ်ဆောင် ဇာဏ်ခီနဲ့ ဒါရိုက်တာခရစ္စတီးနားခီတို့ကတော့ စိတ်တူ၊ ကိုယ်တူ၊ ဝါသနာတူတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေအဖြစ် ပရိသတ်တွေကြားမှာ အားကျရတဲ့စုံတွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင် ပရိသတ်တွေန်ဖိုးထားရသလို စိတ်နေစိတ်ထား၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း လေးစားရတဲ့ ဇာဏ်ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီတို့က ဒီကနေ့မှာတော့ သူတို့ဇနီးမောင်နှံ တန်ဖိုးထားရတဲ့ မင်္ဂလာလက်ဆောင်လေးကို မဲလက်မှတ်နဲ့ရောင်းချပြီး တိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကို လှူဒါန်းသွားမယ့်အကြောင်းကို အခုလိုပဲပြောလာပါတယ်။
“ကိုဇဏ်က ခရစ္စကို မင်္ဂလာသက်တမ်း ၁၃နှစ်မြောက်မှာ surprise လက်ဆောင်လေးအနေနဲ့ အခုပုံထဲမှာဝတ်ပြထားတဲ့ ဆွဲကြိုးလေးနဲ့ နားကပ်လေးပေးခဲ့ပါတယ်။ Fundraising လုပ်ဖို့ပစ္စည်းလေးတွေစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာ အဲဒီ့ပစ္စည်းလေးနဲ့စလုပ်ချင်တယ်လို့ခရစ္စက ကိုဇဏ်ကိုပြောပြပြီးခွင့်တောင်းလိုက်တော့ သူကလည်းကြည်ကြည်ဖြူဖြူပဲလုပ်ပါလို့ပြောပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ အင်အားကြီးတဲ့ခွန်အားတခုဖြစ်စေတယ်လို့ ကိုဇဏ်နဲ့ခရစ္စကတော့ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေအပြည့်ပါတဲ့ မင်္ဂလာချစ်သက်လက်ဆောင်ကို နိုင်ငံရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ကိုဇဏ်နဲ့ခရစ္စတို့နဲ့အတူတူမျှဝေကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အားလုံး Good Luckပါ!!😘 “🌸Fundraising item ကတော့ 18K3color (yellow, white & pink gold) လည်ဆွဲတကုံးနဲ့ နားဆွဲတရံပါ။🌸 ✅Fundraising ticket တွေကိုအခုကစပြီးရောင်းချပေးမှာပါ။
လက်မှတ်ရောင်းချချိန်ကို ၁၅.၁.၂၀၂၂ စနေနေ့မှ ၁၉.၁.၂၀၂၂ အထိရောင်းချပေးသွားပါမယ်။လက်မှတ်များဝယ်ယူချင်ရင်တော့ Chat Box မှာစုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ 🌟နိုင်ငံအလိုက်လက်မှတ်ဈေးနှုန်းများ..မြန်မာ – 10,000 MMK၊ US –6USD ၊ Thai – 200 Baht၊ Singapore – 10 SGD၊ Korea – 7,000 Won *(အခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုဆိုရင်လက်မှတ်တစ်စောင်ကို6USD ပါ။)* 🙏Volunteer အခက်ခဲကြောင့် လက်မှတ်ဝယ်ယူဖို့အတွက်သာ Chat Box မှာမေးမြန်းပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်နော်)🙏🙏🙏” ဆိုပြီး ခရစ္စတီးနားခီက သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေ့ချ်ကနေ ပြောလာပါတယ်။ ဇာဏ်ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီတို့ကတော့ သူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ (၁၃) နှစ်ပြည့်အမှတ်တရ လက်ဆောင်လေးကို မဲလက်မှတ်နဲ့ရောင်းချပြီး တိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကို လှူဒါန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သ႐ုပ္ေဆာင္ ဇာဏ္ခီနဲ႕ ဒါရိုက္တာခရစၥတီးနားခီတို႔ကေတာ့ စိတ္တူ၊ ကိုယ္တူ၊ ဝါသနာတူတဲ့ ဇနီးေမာင္ႏွံေတြအျဖစ္ ပရိသတ္ေတြၾကားမွာ အားက်ရတဲ့စုံတြဲေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အႏုပညာနဲ႕ပတ္သက္လာရင္ ပရိသတ္ေတြန္ဖိုးထားရသလို စိတ္ေနစိတ္ထား၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးနဲ႕ ပတ္သက္ရင္လည္း ေလးစားရတဲ့ ဇာဏ္ခီနဲ႕ ခရစၥတီးနားခီတို႔က ဒီကေန႕မွာေတာ့ သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ တန္ဖိုးထားရတဲ့ မဂၤလာလက္ေဆာင္ေလးကို မဲလက္မွတ္နဲ႕ေရာင္းခ်ၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ေနရာေတြကို လႉဒါန္းသြားမယ့္အေၾကာင္းကို အခုလိုပဲေျပာလာပါတယ္။
“ကိုဇဏ္က ခရစၥကို မဂၤလာသက္တမ္း ၁၃ႏွစ္ေျမာက္မွာ surprise လက္ေဆာင္ေလးအေနနဲ႕ အခုပုံထဲမွာဝတ္ျပထားတဲ့ ဆြဲႀကိဳးေလးနဲ႕ နားကပ္ေလးေပးခဲ့ပါတယ္။ Fundraising လုပ္ဖို႔ပစၥည္းေလးေတြစဥ္းစားလိုက္တဲ့အခါမွာ အဲဒီ့ပစၥည္းေလးနဲ႕စလုပ္ခ်င္တယ္လို႔ခရစၥက ကိုဇဏ္ကိုေျပာျပၿပီးခြင့္ေတာင္းလိုက္ေတာ့ သူကလည္းၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴပဲလုပ္ပါလို႔ေျပာပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ အင္အားႀကီးတဲ့ခြန္အားတခုျဖစ္ေစတယ္လို႔ ကိုဇဏ္နဲ႕ခရစၥကေတာ့ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒီခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြအျပည့္ပါတဲ့ မဂၤလာခ်စ္သက္လက္ေဆာင္ကို နိုင္ငံရဲ႕လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာမွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။ ကိုဇဏ္နဲ႕ခရစၥတို႔နဲ႕အတူတူမွ်ေဝၾကဖို႔လည္းဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အားလုံး Good Luckပါ!!😘 “🌸Fundraising item ကေတာ့ 18K3color (yellow, white & pink gold) လည္ဆြဲတကုံးနဲ႕ နားဆြဲတရံပါ။🌸 ✅Fundraising ticket ေတြကိုအခုကစၿပီးေရာင္းခ်ေပးမွာပါ။
လက္မွတ္ေရာင္းခ်ခ်ိန္ကို ၁၅.၁.၂၀၂၂ စေနေန႕မွ ၁၉.၁.၂၀၂၂ အထိေရာင္းခ်ေပးသြားပါမယ္။လက္မွတ္မ်ားဝယ္ယူခ်င္ရင္ေတာ့ Chat Box မွာစုံစမ္းဝယ္ယူနိုင္ပါတယ္။ 🌟နိုင္ငံအလိုက္လက္မွတ္ေဈးႏႈန္းမ်ား..ျမန္မာ – 10,000 MMK၊ US –6USD ၊ Thai – 200 Baht၊ Singapore – 10 SGD၊ Korea – 7,000 Won *(အျခားနိုင္ငံတစ္ခုခုဆိုရင္လက္မွတ္တစ္ေစာင္ကို6USD ပါ။)* 🙏Volunteer အခက္ခဲေၾကာင့္ လက္မွတ္ဝယ္ယူဖို႔အတြက္သာ Chat Box မွာေမးျမန္းေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္ေနာ္)🙏🙏🙏” ဆိုၿပီး ခရစၥတီးနားခီက သူမရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပ့ခ်္ကေန ေျပာလာပါတယ္။ ဇာဏ္ခီနဲ႕ ခရစၥတီးနားခီတို႔ကေတာ့ သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံရဲ႕ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေန႕ (၁၃) ႏွစ္ျပည့္အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ေလးကို မဲလက္မွတ္နဲ႕ေရာင္းခ်ၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ေနရာေတြကို လႉဒါန္းသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ပရိတ်သတ်တွေ အရမ်းကိုသိချင်နေကြတဲ့ သူမရဲ့ချစ်သူချောချောလေးကို တရားဝင်ထုတ်ပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး